कलाकारकाे रिल र रियल जिन्दगी : कसलाई को फिट ? :: a1nepal.com.np
‘रिल’मा दर्शकको नजरमा जमेको हिरो–हिरोइनको जोडी थुप्रै छन् । ५० को मध्यदशकयताको कुरा गर्दा दर्शकले राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धर, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ–निरुता सिंह र झरना थापा, निखिल उप्रेती र सञ्चिता लुइँटेल अनि आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठको जोडीलाई खुबै मन पराए ।
आर्यन सिग्देल र रेखा थापाको जोडीले पनि ‘किस्मत’, ‘हिफाजत’ र ‘कसले चो¥यो मन’बाट दर्शकको मन जितेको थियो । अहिले उनीहरूको ‘रुद्रप्रिया’ हलहरूमा चलिरहेको छ । आर्यन र रेखाको झन्डै ८ वर्षको अन्तरपछि यही फिल्मबाट पर्दामा पुनर्मिलन भएको थियो । तर, यो फिल्मबाट दर्शकले उनीहरूलाई पहिलाजस्तो ‘नोटिस’ गरेनन् ।
एकताका भुवन केसी र तृप्ति नाडकरको जोडी निकै जमेको थियो । ‘कुसुमे रुमाल’, ‘सम्झना’ र ‘साइनो’ फिल्मले उनीहरूलाई निकै चर्चित बनाएका थिए । तृप्तिपछि भुवनलाई करिश्मा मानन्धरसँग पनि निकै मन पराइयो । भुवन र करिश्माले ‘मायालु’, ‘महादेवी’, ‘सपना’लगायतका फिल्ममा सँगै काम गरे । ‘करोडपति’ फिल्ममार्फत आफूलाई निर्माणमा समेत होमेका भुवनले त्यसपछि फिल्म अभिनय कम गर्दै लगे ।
करोडपति हिट भएपछि उनी तत्कालीन कान्छी पत्नी सुस्मितासँगै ‘नेपाली बाबु’, ‘सुपरस्टार’, ‘तँ त साह्रै बिग्रिस् नि बद्री’, ‘बाबुसाहेब’ र ‘म तिमीविना मरिहाल्छु’मा देखिए । उनीहरूको जोडी न ‘रिल’ न त ‘रियल’मा नै जम्यो । अन्ततः भुवन र सुस्मिता छुट्टिए ।
भुवनले फिल्म अभिनय कम गरेपछि करिश्माको ‘केमेस्ट्री’ राजेश हमालसँग मिल्यो । त्यतिवेलाका अधिकांश फिल्ममा राजेश र करिश्मा हुन्थे । दर्शकले यो ‘रिल’ जोडीलाई निकै मनपराएको थियो । उनीहरूले ‘प्रतीक्षा’, ‘कान्छा’, ‘अल्लारे’, ‘मिस्टर रामकृष्णे’, ‘ताल’, ‘साथी’, ‘ढुकढुकी’, ‘वसन्ती’, ‘वरदान’लगायतका फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका छन् ।
करिश्माअघि हमालको कृष्टि मैनालीसँगको जोडी पनि दर्शकले मनपराएका थिए । हमाल र मैनालीले ‘युगदेखि युगसम्म’, ‘कसम’, ‘अधिकार’, ‘गोपीकृष्ण’लगायतका फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका थिए ।
निर्देशक शिव रेग्मीका अधिकांश फिल्ममा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र निरुता सिंह सँगै देखिए । ‘आफन्त’, ‘आफ्नो मान्छे’, ‘कहाँ भेटिएला’ मात्र होइन, नारायण पुरीको ‘आफ्नो घर आफ्नो मान्छे’, दीपक श्रेष्ठको ‘दुःख’, प्रदीप श्रेष्ठको ‘अजम्बरी नाता’ फिल्ममा पनि श्रीकृष्ण र निरुताको जोडी निकै मन पराइयो । श्रीकृष्णसँगै ‘ए मेरो हजुर’, ‘पाहुना’, ‘सुख–दुःख’, ‘हामी तीन भाइ’लगायतका फिल्ममा झरना थापासँगको जोडी पनि निकै चलेको थियो ।
एक्सन हिरो निखिल उप्रेतीले थुप्रै हिरोइनसँग अभिनय गरे पनि सञ्चिता लुइँटेलसँगको ‘रिल’ जोडी दर्शकले मनपराएका थिए । निखिल र सञ्चिताले ‘चोर–सिपाही’, ‘दाग– नमेटिएको घाउ’, ‘माया त माया हो’, ‘विजयपथ’लगायतका फिल्ममा सँगै अभिनय गरे ।
आर्यन सिग्देल आफू र नम्रता श्रेष्ठको जोडी ‘फिट’ हुने ठान्छन् । सुदर्शन थापाको ‘मेरो एउटा साथी छ’मा पहिलोपटक सँगै अभिनय गरेका आर्यन र नम्रताले त्यसपछि ‘नोभेम्बर रेन’ र ‘क्लासिक’मा सँगै अभिनय गरे । चर्चा भए पनि आर्यनले निर्माण गरेका दुवै फिल्मले आर्थिक मुनाफा भने दिलाएनन् । त्यसकारण आर्यन अब निर्माण गर्ने फिल्ममा नयाँ हिरोइन राख्ने सोचमा छन् ।
निर्देशक शम्भु प्रधानका लगभग सबै फिल्मको स्क्रिप्ट राइटरमा पत्नी नूतनको नाम हुने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, पति शम्भुले ‘सक्कली–नक्कली’ फिल्ममा त पत्नी नूतनलाई नै हिरोइन बनाए । ‘स्वर्ग’ फिल्ममा नूतनलाई महालक्ष्मीको भूमिकामा उतारे । ‘सरस्वती’ फिल्ममा पनि नूतन प्रमुख भूमिकामै थिइन् । पछिल्लो फिल्म ‘रंग बैजनी’ असफल भएपछि भने प्रधानले फिल्म निर्माण गरेका छैनन् ।
अभिनेत्री करिश्माका पति विनोद मानन्धरले ‘महादेवी’, ‘सारंगी’लगायतका केही फिल्ममा चरित्र भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा उनी अभिनयमा सक्रिय छैनन् । करिश्मा र विनोदले ‘ढुकढुकी’, ‘बाबुसाहेब’ र ‘फागु’ फिल्म निर्माण गरेका थिए । ‘रिल’ मा त होइन, ‘रियल’मा भने करिश्मा र विनोदको जोडीको चर्चा यद्यपि हुने गर्दछ ।
अभिनेत्री झरना थापा र सुनीलकुमार थापालाई पनि आदर्श जोडी मान्ने गरिएको छ । सुनीलकुमार फिल्म निर्माणमा मात्र संलग्न छन् । उनलाई अभिनयमा रुचि छैन । आफ्नो करिअर उचाइमा पु¥याउन पति सुनीलकुमारको महत्वपूर्ण रहेको झरना बताउने गर्दछिन् । झरना र सुनीलले ‘धर्मसंकट’, ‘गोर्खाली’, ‘ए मेरो हजुर’, ‘तक्दिर’, ‘फेसबुक’ र ‘ए मेरो हजुर–२’ फिल्म निर्माण गरिसकेका छन् । एक–अर्कामा माया र विश्वासका कारण फिल्मकारितामा सफल भएको उनीहरू बताउने गर्दछन् ।
पछिल्लो समय फिल्ममा जमेको ‘रियल’ जोडी हो–निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्काको । ‘लुट’बाट उदाएका निर्देशक निश्चल र ‘होस्टेल रिटन्र्स’बाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी स्वस्तिमालाई ‘दुई रुपैयाँ’ फिल्मको ‘कुटुमा कुटु सुपारी दाना’ गीतबाट दर्शकले निकै मन पराए । पछिल्लो समय निश्चल फिल्म निर्देशनका साथै अभिनयमा समेत स्थापित हुन लागिपरेका छन् ।
त्यसैगरी, निश्चलपत्नी स्वस्तिमाले पनि आफूलाई हिरोइनका रूपमा चलायमान बनाउँदै लगेकी छिन् । उनले होस्टेल रिर्टन्सपछि ‘लभलभलभ’ र ‘छक्का पन्जा–२’मा अभिनय गरिन् । दुई रुपैयाँको एउटा गीतको नृत्यमा मात्र निश्चल र स्वस्तिमालाई हेर्न पाएका दर्शकहरूले यो जोडीले सँगै फिल्ममा अभिनय गरेको हेर्न चाहेका छन् ।
१८ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै निकिता चन्दक मिस नेपाल– २०१७ घोषित (भिडियो पनि) पोर्न फिल्ममा फर्कन चाहदिनन् बलिउड अभिनेतृ सन्नी लियोन सार्वजनिक भयो विन्ध्यवासिनी अवार्डको मनोनयन सम्पदा बानियाले उमेश भाट्लाई विवाहको लागी बोलाए पछी श्वेता खड्काद्वारा स्व. श्रीको जन्मतिथीको असरमा अनाथ बालबालीका लाई न्यानो लूगा वितरण आन्दोलनमा उक्साहट थपिन सक्ने भन्दै चलचित्र भैरवलाई तराई प्रदर्शनमा रोक अभिनेता सुनील थापालाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड आठौं नेफ्टा अवार्ड कतारमा गरिदै, क्लाप पड्काएर अवार्डको घोषणा ‘भाग सानी भाग’मा भाग्दै केकी रंगमञ्चबाट राजनितिमा बसाई सरिन नायिका ‘रञ्जु’
← इस्लामिक स्टेटद्वारा मेस्सी र नेमारलाई ज्यान मार्ने धम्की	राष्ट्रियताकोलागि राज भन्दै राष्ट्रवादी नागरिक समाज →